Codsiga Kursiga cagaaran wuxuu ka bilaabmay Gaadiidka Dadweynaha ee Izmir | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirCodsiga Kursiga cagaaran wuxuu ka bilaabmay Gaadiidka Dadweynaha ee Izmir
25 / 03 / 2020 35 Izmir, tareenka, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Metro, TURKEY, taraamka
Codsiga kursi-cagaarka ah wuxuu ka bilaabmay gaadiidka dadweynaha Izmir
“Codsiga kursi-cagaarka” waxaa lagu bilaabay gaadiidka dadweynaha ee İzmir. Hadda laga bilaabo, muwaadiniintu waxay ku fariisan doonaan kuraasta lagu calaamadeeyay midab cagaaran waxayna ilaalin doonaan fogaanta bulshada.
Wareegtada Coronavirus, oo ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, ayaa mamnuucday in ka badan 50 boqolkiiba awoodda ay u leedahay gaadiidka dadweynaha. Sida ku xusan go'aanka, "Codsiga kursi cagaaran" waxaa lagu bilaabay dhammaan gaadiidleyda dadweynaha ee degmada İzmir ee Magaalo Weyn. Kuwa raacda gaadiidka dadweynaha waxay ku fariisan doonaan kuraasta lagu calaamadeeyay cagaar waxayna ilaalin doonaan masaafada bulshada ee rakaabka kale. Kuraasta ku xiga rakaabku waxay ahaan doonaan madhan, halka kuraasta dambe ay ku fadhiisan karaan kuraasta iskutallaabta.
Kursiga aaminka ah
Degmooyinka Caasimadda, oo waliba diyaariyey qodobo wargelin ah oo ku saabsan dalabka kuraasta cagaaran iyo tallaabooyinka la qaaday, ayaa qodobbadaas ku laalay xarumaha wareejinta, dekedaha, saldhigyada iyo saldhigyada metro, taraam, markab, tareen iyo bas. Codsiga kursi-cagaarka ah ee ka celinaya fadhiga dhinac iyo gadaal, 'Fadlan iska ilaali xiriir dhaw. 'Fadhiiso kuraasta cagaaran ee dhibcaha loogu talagalay' farriinta waa la bixiyaa.
Maxuu yahay wareegtada Wasaaradda?
Sida laga soo xigtay Wareegtada Wasaaradda Gudaha Gudaha, in kabadan 50 boqolkiiba tirada rakaabka (ugu badnaan 7 qof basaska) ee lagu caddeeyay liisannada gawaarida waa mamnuuc.
Rakaabku ma awoodi doonaan inuu dhinac fadhiisto, oo kursi baa looga tegi doonaa madhan dhexdooda. Kuwa fadhiista safka dambe waxay fadhiisan karaan ka soo horjeedka iskutallaabta rakaabka hore.
Koontaroolka hirgelinta waxaa fulin doona Agaasinka waaxyaha Waaxda Amniga Waddooyinka iyo kooxaha booliiska ee degmada.
Habka cagaaran iyo codka daahyada ee nidaamka tareenka